Find jobs in Myanmar | Jobs In Yangon ﻿
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ပေါင်း 3891 ကို ယခု ကမ်းလှမ်းနေပါသည်။
အလုပ်အမျိုးအစား Airline & Automobile jobs Farming & Veterinary JobsAccountancy JobsAdmin, Secretarial & PA jobsAdvertising/Media Planning Jobs Advisory JobsAgricultural JobsAnimals, Farming, and the EnvironmentArchitecture & Design jobsArts, Crafts, and DesignAudit & Taxation JobsBanking & Insurance jobsစီးပွားရေးဖွံဖြိူးတိုးတက်မှုBusiness Management JobsChemical Engineering JobsChemistry JobsConstruction & Property jobsCustomer Service & Call Centre jobsDriver, Security & Cleaning jobsEducation, Childcare & Teaching jobsElectrical Engineering JobsEngineering & Technical jobsFMCG jobsFarming & Agriculture jobsFinancial Management JobsFood & Beverages/Bakery JobsFood Tech/Nutritionist JobsGraduate jobsHR,Training & Recruitment jobsHealth & Medicine jobsHeavy Equipment /Machinery Operator JobsHospitality & Tourism jobsHotel & Restaurant JobsIT & Telecoms jobsIT/Computing JobsLegal & Compliance jobsLogistics & Supply Chain JobsMaintainance and Production JobsMaintenance Jobs Manufacturing jobsMarketing & PR jobsMechanical/Automotive Engineering Jobs Media,Digital & Creative jobsMerchandising JobsMotoring & Automotive jobsNGO, Charity & Voluntary jobsNetworking JobsOil/Gas Engineering Jobs Pharmacy Jobs Project Management JobsPublic Sector & Government jobsPurchasing/Material Management JobsQuality Assurance JobsReal Estate Sales JobsRetail jobsSales & Business Development jobsSales & Marketing JobsSales - Engineer/Tech/IT JobsScience & Research jobsSecretarial Jobs Security & Safety jobsSenior Management jobsSocial Care jobsSpaTelecom jobsTop Management Jobs Trading JobsTranslator/Interpreter JobsTransport & Logistic jobsWeb Developer Jobs
အလုပ်တည်နေရာYangon (Rangoon)ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနိုင်ငံတကာကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး+Rest of Myanmar
အမြန်ရှာနည်းများ: Expat jobs | Accountancy Jobs | စီမံခန်.ခွဲမှု | ယနေ့အလုပ်များ |
လူကြီးမင်း၏ Resume ကို ထည့်ပြီး အလုပ်အသစ်နောက်တစ်ခုကို ရှာဖွေပါ။
JobsInYangon.com တွင် လူကြီးမင်း၏ Resume ကို အခမဲ့တင်ပါ။
အလုပ်နောက်တစ်ခု အမြန်ဆုံးရမည့် နည်းလမ်း
-active ဖြစ်နေသည့် အလုပ်အကိုင်ပေါင်း + ၄၅၀၀ ကျောက်ကို ရှာပါ။
-၄င်းသည် လူကြီးမင်းအား အလွန်ကောင်းမွန်သည့် CV ကို ဖန်တီးပေးရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
-ယခု ကုမ္ပပေါင်း ၅၀၀ ကျော်မှ ဝန်ထမ်းများခန့်အပ်ရန် အရည်အချင်းရှိသော ဝန်ထမ်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်။
-နေ့စဉ် အလုပ်အကိုင်အသစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကို တင်ပေးနေပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm
V Net - Mandalay Internet Service Provider - Mandalay City
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd - Yangon Region
V Net - Mandalay Internet Service Provider - Mandalay Region
Power Light Co.,Ltd - Yangon (Rangoon)
Finance Manager(Yangon) (Code-41903) M/F (5)
Dagon Glory Co., Ltd. - Yangon Region
Operation Manager (Foreign Automobile Service) (Code-41856) ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd - Yangon (Rangoon)
V Net - Mandalay Internet Service Provider - Yangon (Rangoon)
JobsInYangon.com - Yangon (Rangoon)
Trust Venture Partners Co., Ltd - Yangon (Rangoon)
VPower Group Holdings Limited - Yangon (Rangoon)
Ve Ve Soft Drinks Factory - Yangon Region
Ve Ve Soft Drinks Factory - Yangon (Rangoon)
Nilar Group Of Companies - Yangon (Rangoon)
အခြားသော အလုပ်များကို ကြည့်ပါ။ Expat jobs
လူကြီးမင်း၏ နေရာဒေသတွင် မည်သူအလုပ်ခန့်နေသည်ကို ကြည့်ပါ။ အိမ်နဲ့နီးသောအလုပ်များကို ရှာပါ။
Work in တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး(20)
Work in စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(23)
Work in ရခိုင်ပြည်နယ်(5)
Work in နေပြည်တော်(26)
Work in မွန်ပြည်နယ်(21)
Work in ကရင်ပြည်နယ်(17)
Work in ကချင်ပြည်နယ်(7)
Work in နိုင်ငံတကာ(3)
Work in ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး(19)
Work in +Rest of Myanmar(7)
လူကြီးမင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကဏ္ဍကို ရွေးချယ်ပါ။
V Net - Mandalay ...
Japan Tobacco Int ...
By Myanmar Decora ...
DHL Global Forwar ...
Friesland Campina Myanmar
JobsinYangon.com သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူသိအများဆုံးသော
အလုပ်ရှာဖွေနိုင်သည့် website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ JobsInYangon.com သည် အရည်အချင်းပြည့်ဝသူများကို အလုပ် ခန့်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးသော ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှု ဆိုင် ရာတွင် ဦးဆောင်နိုင်သည့် website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Jobless Platform သည် လုပ်ငန်းရှင်လူကြီးမင်းများလိုအပ်သည့် ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်း၊ အလုပ်တင်ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှု တွင် မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်မှုကရွေးချယ်နိုင်ခြင်းစသည့် ဝန်ဆောင် မှုများကို ပေးပါသည်။ Jobless သည် အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်၊ လျင်မြန်စွာ ဝန်ထမ်းများရှာဖွေနိုင်ရန်၊ ပူးတွဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်စသည့် အကောင်းဆုံးအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းနှင့် ပက် သက်သောအရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် recruitment manage-ment software ကို လုပ်ငန်းရှင်လူကြီးမင်းများ အတွက် အသုံး ပြုထားပါသည်။ ထို့အပြင် jobless သည် အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သောပြည်တွင်းဝန်ဆောင်မှုမြန်မာ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်ရှာဖွေ သူလူကြီးမင်းများအတွက်လည်း များပြားသောအလုပ်များကို online တွင် အကောင်းဆုံးတင်ပေးနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်လုပ်ရက်တိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်ပေါင်း ၁၀၀ကျော်ကို ပံ့ပိုးနေသော နံပါတ်(၁) အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး Website တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် စနေ၊တနင်္ဂနွေ နှင့် အခြားသော ရုံးပိတ်ရက်များတွင်လည်း အလုပ်အကိုင်သစ်များကို တင်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုင်းဒေသကြီးများနှင့် ပြည်နယ် များရှိအလုပ်များအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရရှိနိုင်သော အလုပ် သစ်များကို လူတိုင်းရယူရှာဖွေနိုင်သော website ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာနှင့်နိုင်ငံတကာအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ကိုလည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ Jobless ကို အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြန်မာလူမျိုးများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရန်နှင့်ရှာဖွေရန် တည်ထောင် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတုိ့၏အလုပ်များကိုရွေးချယ်ကြပြီး လူကြီးမင်းတို့၏အလုပ်ကို နှစ်သက်မြတ်နိုး နိုင်ပါစေ။
လူကြီးမင်းသည် ယခုလက်ရှိအလုပ်တွင် ငြီးငွေ့ပြီး မပျော်ရွှင်မှုများ နှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသလား? မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသလား? ရန်ကုန်တွင် အလုပ်သစ်တစ်ခုရရှိရန် ကြိုးစားနေပါသလား?
www.jobsinyangon.com နှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပြီး လူကြီးမင်းနှင့် သင့်လျော်သောအကောင်းဆုံး အလုပ်များဖြစ်သည့် ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အရောင်း၊ အိုင်တီ၊ ခရီးသွားလာရေး ၊ NGO စသည့် နယ်ပယ်တို့မှ အလုပ်များကို ရှာဖွေ၍ လျှောက်ထားလိုက်ပါ။ လူကြီးမင်းသည် နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Telenor, Ooredoo, Nestle, Unilever, Coca-Cola, Carlsberg နှင့် အခြားသောနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများမှ အလုပ်များကို ရှာဖွေနေပါသလား?
www.jobless.com.mm အလုပ်ရှာဖွေသည့် search engine သည် အထူးကောင်းမွန်သော စတင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အလုပ်ရှာဖွေသူများ ရန်ကုန်တွင်သာမက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ပါ အလုပ်ရှာဖွေနိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းတို့အတွက် အလုပ်ကောင်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်းတို့အတွက် hot jobs, dream jobs စသဖြင့် လူကြီးမင်းတို့နှစ်သက်သည့် အလုပ်များကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်။ အလုပ်မရှိသေးသူများ (သို့) အလုပ်ရှိ သော်လည်း ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလုပ်များကို ရရှိရန် ကြိုးစားနေ သောလူကြီးမင်းများအတွက် Jobless.com.mm သည် အမှန်ကန် ဆုံးသော နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော အလုပ်ရှာဖွေနိုင်သည့် website ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် အလုပ်များကို အဆက်မပြတ်တင်ဆက်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ် တို့အား လူကြီးမင်းနှစ်သက်ရာ အဓိကစကားလုံး ( သော့ချက်) ကို ထည့်၍ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ( jobs in Myanmar, job search, jobs, work, engineering jobs, myjobs, job search, Mandalay jobs, part-time jobs, full-time jobs, seek job, find job, job, jobs, apply jobs, job search, job list, jobs for foreigners, CV search, looking forajob, search jobs စသည့်) ဖြင့်လည်းကောင်း ၊ www.jobsinyangon.com ဖြင့်လည်းကောင်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတွင် CV ရှိပါက လူကြီးမင်း၏ CV ကိုကျွနု်ပ်တို့၏ site တွင်တင်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန် သော အလုပ်ကောင်းကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ website သည် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ၊နေပြည်တော်၊ ပဲခူး စသည့် မြန်မာ ပြည်တစ်ပြည်လုံးရှိအလုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်း နှစ်သက်ရာအလုပ်နယ်ပယ် (သို့) လစာတို့ကို filter ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့်လည်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျောင်းသား၊ ဘွဲ့ရ၊ အလုပ်အတွေ့အကြုံရှိသူများ အတွက်လည်း အလုပ်များရှိပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ account တွင် filter ပြုလုပ်ပြီး အလုပ်သစ်များ သတင်းကိုရရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့ system မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို လူကြီးမင်းအား ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူလက်တွဲလုပ်ကိုင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီမှ ယနေ့ ဝန်ထမ်းများရှာနေကြပါပြီ။
Copyright © Roger Quest International Co., Ltd. All rights reserved. Material may not be published or reproduced in any form without prior written permission. Sitelink